घिउकुमारीका यी १२ फाइदा छन् तर यी अवस्थामा भने प्रयोग गर्दा हानी हुन्छ - यादका टुक्रा
घिउकुमारीका यी १२ फाइदा छन् तर यी अवस्थामा भने प्रयोग गर्दा हानी हुन्छ
1 year ago 1666 Views
एलोबेरा अर्थात घिउकुमारी औषधीय गुणको वनस्पती हो, जो सहजै बगैंचा वा करेसाबारीमा उमार्न सकिन्छ । यसलाई सानो गमलामा रोप्न सकिन्छ । हुर्काउन र स्यहार्नका लागि पनि खासै गाह्रो छैन । अर्थात हाम्रो निम्ति गुणकारी वनस्पती हो यो । घिउकुमारीको पातमा तरल पदार्थ हुन्छ । यसमा केहि प्रकारको प्रोटिन र भिटामिन पाइन्छ । त्यसैले उक्त पातको प्रयोग फाइदाजनक मानिन्छ, स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुबैका लागि ।
के पाइन्छ घिउकुमारीमा ? : घिउकुमारीमा भिटामिन ए, बि-१, बि-२, बि-६, बि-१२ र ई पाइन्छ । साथै यसमा फोलिक एसिड जस्ता पोषक तत्व हुन्छ । यसको जेलमा तामा, फलाम, क्याल्सियम, जिंक, पोटाशियम, क्रोमियम, म्याग्नेशियम जस्ता तत्व पाइन्छ । यो प्राकृतिक रुपमा प्रभावशाली जडिबुटी हो ।
छालाको सौन्दर्य बढाउन : घिउकुमारीमा जे तत्व पाइन्छ, त्यसले छालालाई हाइड्रेट राख्छ र पोषक तत्व पनि प्रदान गर्छ । यसले नयाँ कोशिकाको उत्पादनमा पनि भूमिका खेल्छ । अनुहारमा घिउकुमारीको जुस लगाउँदा त्यसले अनुहारलाई चम्किलो र मुलायम बनाउँछ ।
केसको लागि : घिउकुमारी एकदमै राम्रो मोश्चराइजर हो, जसले केसलाई घना र मुलायम बनाउँछ । यसले केसको पिएच सन्तुलन गर्नमा पनि सहयोग गर्छ । घिउकुमारीमा हुने पोषण तत्वले केस बढ्न सहयोग गर्छ र र्झन दिँदैन । घिउकुमारी जेलमा कागतीको रस मिसाएर केसमा लगाउनुपर्छ । त्यसपछि २० मिनेट जति तातो तैलियाले केसलाई लपेट्ने । अन्त्यमा मनतातो पानी र हल्का स्याम्पूले केस सफा गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हरेक दुई हप्तामा दोहोर्‍याउनु पर्छ ।
दाँत र गिजाको लागि : घिउकुमारीमा आफ्नो प्राकृतिक जीवाणुरोधी र रोगाणुरोधी गुण हुन्छ, जसले गिजा र दाँतलाई स्वस्थ्य तुल्याउँछ । यो विभिन्न प्रकारको भिटामिन र खनिजले भरिएको हुन्छ, जसले कोसिकाको विकासमा सहयोग गर्छ । त्यही कारण गिजाबाट रगत बग्ने, मुखको अल्सर जस्ता समस्या हुन दिदैन ।
पेटको लागि : घिउकुमारी पेटको स्वस्थ्यका लागि पनि लाभदायक हुन्छ । यसमा उच्च मात्रामा फाइबर पाइन्छ, जसले पाचन यन्त्रलाई चुस्त बनाउँछ । घिउकुमारीको रस कब्जियतको उपचारमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कब्जियत भएको अवस्थामा घिउकुमारीको जुस पिउनुपर्छ । १. घिउकुमारी सेवन गर्दा त्यसले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुन दिदैन । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ । २. हाम्रो शरीरको भित्री अंगहरु सफाइ गर्नमा पनि यो उपयोगी हुन्छ । यसले शरीरको नसा, नाडी आदि सफाइ गर्छ ।
३. छाला र केसलाई बलियो, मुलायम बनाउनका लागि घिउकुमारीले प्रभावकारी काम गर्छ । ४. घिउकुमारीको जुस सेवन गर्दा छाला रुखो हुँदैन । चम्किलो र नरम हुन्छ । ५. घिउकुमारीको जुस सेवन गर्दा अनुहारको खराबी, मूसा, रुखोपन, चाहुरी, दाग धब्बा हट्छ । ६. घिउकुमारीको सेवन जो कोहिले गर्न सक्छन्, यसको साइड इफेक्ट छैन । घिउकुमारीको जुसले रगतलाई शुद्ध बनाउने, हेमोग्लोबिनको कमी पुरा गर्ने र शरीरमा ब्लड सेल्सको संख्या बढाउन सहयोग गर्छ ।
७. तौल नियन्त्रण गर्नका लागि पनि घिउकुमारीको जुस उपयोगी हुन्छ । ८. घिउकुमारी जुसले दाँत सफा गर्ने र रोगमुक्त राख्छ । यसलाई माउथ प|mेशनरको रुपमा काम गर्छ । ९. यसले केस झर्ने समस्याबाट पनि मुक्ती दिन्छ । १०. फेसवासको रुपमा समेत घिउकुमारी उपयोग गर्न सकिन्छ । ११. घिउकुमारीको जुस नियमित रुपले सेवन गर्दा कब्जियतबाट छुटकारा मिल्छ । १२. घिउकुमारीको जुसले मधुमेहमा पनि राहात मिल्छ । साथै कोलोस्टोर नियन्त्रणमा पनि यो प्रभावकारी हुन्छ ।
कसका लागि हानिकारक हुनसक्छ ? : घिउकुमारीको प्रयोग सबैका लागि फाइदाजनक हुँदैन । कतिपय अवस्थामा यसले नराम्रो असर पनि गर्छ । खासगरी गर्भवती र स्तनपान गराइरहेका महिलाले घिउकुमारीको जुस सेवन गर्नु हुँदैन । यो १२ बर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाको लागि पनि असुरक्षित मानिन्छ । हृदय रोगीका लागि पनि घिउकुमारी जुस राम्रो मानिदैन । किनभने यसले शरीरमा एड्रेनालाइन अत्याधिक मात्रामा उत्पन्न गर्न सक्छ । यसले शरीरमा पोटाशियमको मात्रा पनि कम गर्छ, जसले मुटुको धड्कन अनियमित गराउन सक्छ ।
Don't Miss it मुटुको रोग रोक्न वा छ भने यसरी पिपलको पातको रस सेवन गर्नु पर्छ
Up Next माछा स्वादका लागि मात्रै होइन, यी कुरा पाउन माछा अति उत्तम
पकाउनै नहुने ५ कुराहरु तर हामीले पकाएर खाँदा रहेछौँ र बिरामी हुँदा रहेछौँ
खानेकुरा हामी किन खान्छौ ? सामान्यत यसको जबाफ हो, भोक मेट्न । खानाको सम्बन्ध भोकसँग मात्र छैन । खाना त्यस्तो…
5 months ago 7624 Views
बिहानै खाजा नखादा कस्ता कस्ता समस्या आउँछन् ? लक्षणहरु सहित
बाँच्नका लागि दिनमा तीन पटक भोजन लिनुपर्छ । स्वस्थ्य जीवनका लागि चार/पाँच पटकसम्म खानुपर्छ । एकसाथ धेरै होइन, बरु थोरै-थारै…
5 months ago 1294 Views
यति ३ कुरा मात्रै गरे पनि पुग्दो हुन्छ घरैमा अर्ग्यानिक तरकारी तर कसरी ?
हाम्रो भान्साका विषाक्त साग तरकारी भित्रिने गरेका छन् । तरकारीको माध्यामबाट हामी विष सेवन गरिरहेका छौं । अहिले अर्ग्यानिक तरकारी…
5 months ago 726 Views
मासु नखादा शरिरलाई हुने २५ फाइदा के रहेछन् ? मासु खानेले पढ्नै पर्ने
5 months ago 8708 Views
निरोगी हुन अम्लिय र क्षारिय खानाले स्वस्थ बनाउँछ तर भान्साको केमा पाइन्छ यस्तो खाना ?
5 months ago 812 Views
फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न चाहानुहुन्छ ? खानुहोस् यी खानेकुरा, हुन्छ क्यान्सरको जोखिम कम
फोक्सो शरीरको महत्वपूर्ण र संवेदनशील अङ्ग मध्य एक हो । श्वास-प्रश्वास गर्न फोक्सोले निकै ठुलो भूमिका खेल्छ।पछिल्लो समय प्रदुषित बातावरण…
1 year ago 60 Views
कहिले पिँडालु खानु भएको छ ? स्वास्थ्यका लागि यति धेरै फाइदा
पिँडालु गर्मी तथा बर्षायाममा पाइन्छ। पिँडालुमा पर्याप्त पोषक तत्व पाइन्छ। यसमा फाइबर, प्रोटीन, पोटाशियम, भिटामिन ए र सी, क्याल्सियम, आइरन…
5 months ago 266 Views
बाउ बन्दै हुनुहुन्छ ? यसरी असल पिता बन्नुहोस्
आमा र ममता अपरिभाषित हुन्छ । बच्चालाई आफ्नो आमा प्रति जति स्नेह हुन्छ त्यति नै स्नेह आफ्नो पितासँग पनि हुन्छ…
1 year ago 633 Views